Ximin & Xeeb oo ka digtay in Maamul gaar ah oo isku mashquuliyo Dib u howlgelinta Dekeda Hobyo – SBC
Ximin & Xeeb oo ka digtay in Maamul gaar ah oo isku mashquuliyo Dib u howlgelinta Dekeda Hobyo
Hadalkan ka soo yeeray maamulka Ximin iyo xeeb ayaa ka dambeeyay ka dib markii kulan ay qaateen golaha Baarlamanka Maamulkaasi ay kaga hadleen arinta ku aadan in maamulka Galmudug keligiis uuna go’aan ka qaadan Karin Dib u howlgelinta Degkeda Hobyo.
Maxamed Cumar Afhayeenka Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa u sheegay Xafiiska SBC International ee Galgaduud In Maamulkoodu soo saaray Dignin ka dhan ah in Maamul gaar ah uu isku mashquuliyo Furitaanka Dekeda Hobyo, .
Waxaa sidoo kale uu sheegay Afhayeenka oo Aqriyay Qodobo warsaxaafadeed ka soo baxay golaha sare ee maamulkaasi in go’aamada aan loo mideysneyn ee uu qaadanayo Cabdi Qebdiid waa Masuulka Maamulka Galmuduge aysan noqon kuwo isku dhac ka yimaada.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Ninka lagu magacaabo Cabdi Qeybdiid ayaa dhowaan ku dhawaaqay in maamulkiisu dib u howlgelinayo dekeda Degmada Hobyo, waxana taasi ay keentay Jawaab ay Maamulka Ximin iyo xeeb ku diidan yihiin hadalka Masuulkaasi.
Marka laga hadlayo gobolada Mudug iyo Galgaduud Dekeda Hobyo waxay u tahay Halbowle, waxaana mudooyinkii ugu dambeeyay soconayay wadahalado u dhexeeya ganacstada iyo maamulada kuwaasi oo lagu doonayo in dib loogu howlgeliyo dekedaasi.